भोलि माघ १७ सोमबार,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि माघ १७ सोमबार,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल!
भोलि माघ १७ सोमबार,शुभ-अशुभ कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस भोलिको राशिफल!
admin January 30, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 227 Views
मेष : सामाजिक सेवामूलक कामबाट तपाईलाई मानसम्मान मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ । उच्चब्यक्तिबाट प्राप्त हुने सम्मानले तपाईको मनमा हर्ष छाउने छ । विहान सूर्योदयको दर्शन गर्नाले मनमा उर्जा थपिने छ । नयाँ कामको शुरुवात हुनेछ ।
वृष : तपाईलाई आज आकस्मिक धनलाभ हुनेछ । व्यापार ब्यबसायबाट नसोचेको आर्थिकलाभ प्राप्त हुनेछ । शत्रुमाथि विजयप्राप्त हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्त हुनाका साथै यात्राको अवसर प्राप्त हुनेछ । आजको दिन कसैँसँग विवाद नगर्नुहोला ।
मिथुन : धनलाभ र नयाँ नयाँ खबरले तपाईको मनमा खुसियाली छाउने छ । परिवार र आफन्तसँग केही विषयमा विवाद हुनसक्छ । त्यसैले आजको दिन कम बोल्ने र अर्काका कुरा सुन्ने गर्दा राम्रो हुनेछ । तपाईमाथि अनावश्यक आरोप लाग्नसक्छ त्यसैले आफ्नो काम र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु होला ।
कर्कट : कर्कट राशिका जातकहरुको लागि आजको दिन तपाईको सोचअनुसार नैं काम हुनेछ । चन्द्रमाको साथ रहेको छ । विहान सूर्यनारायणको दर्शन गर्नुभयो भने उर्जा थपिने छ । कुनै नयाँ कामको लागि तपाईलाई प्रस्ताव आउन सक्छ । आफ्नो कामलाई जिम्मेवारपूर्ण ढंगले गर्नुभयो भने तपाईको मनमा सफलता मिल्नेछ ।
सिंह : सिंह राशिका जातकले विहीबारको विहान सूर्योदयको दर्शन गर्नुहोला । आजको दिन भुलेर पनि कसैसँग विवाद नगर्नुहोला । पारिवारिक समस्याका कारण मनमा अनेक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले आजको दिन मौन रहेर आफ्नो नियमित कार्य गर्नुहोला । आजको दिन अध्यात्म कार्यको लागि समय दिनुहोला । भजन र कीर्तन श्रवण गर्नुहोला ।
कन्या : मित्रमण्डलीसँगको भेटले कार्यगत उत्साह थपिने छ । आफन्त र मित्रजनबाट साथ र सहयोगको प्रस्ताव आउनसक्छ । आजको दिन नयाँ बस्त्र खरिद गरेर लगाउन राम्र्रो हुनेछ । स्त्रीजातिको साथ र सहयोग लिएर कुनै काम गर्नु थाल्नुभएको छ भने सोचअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । आजको दिन परिवारका सदस्य र कन्यालाई भोजन गराउनु होला ।
तुला : तुला राशिमा जातका लागि मानसिक असन्तोष र तपाईले सोच अनुसारको काम नहुँदा चिन्ता थप हुनसक्छ । त्यसैले मनमा सकारात्मक सोच राखेर काम गर्न आवश्यक छ । व्यापार ब्यबसायमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईलाई फाइदा हुन्छ । धैर्यको आवश्यकता हुन्छ । सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्नु होला ।
वृश्चिक : विहान सूर्योदयको दर्शन गरेर दिनको शुरुवात गर्नुहोला । मनमा प्रसन्नता र उत्साह बढ्ने छ । तपाईले कुनै नयाँ कामको शुरुवात समेत गर्न सक्नुहुनेछ । आज शुरुवात गरेको कामबाट सफलता प्राप्त हुनेछ । आफ्नो नियमित काम गर्दा होसियारी, धैर्यतापूर्वक काम गर्नुहोला ।
धनु : सन्तान र स्त्रीजातिको साथ सहयोगले तपाईको कार्य प्रगति हुनेछ । आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला । आजको दिन ब्यर्थमा समय खर्च र अनावश्यक आर्थिक भार थपिने छ । तपाईको मनमा उर्जाका लागि देवालय र शिवालयको सम्झना र ध्यान गर्नुहोला । ध्यान, साधना र मौनको आवश्यकता देखिन्छ ।
मकर : तपाईले सोचेअनुसारको काम हुने भएकाले नयाँ काम गर्नसक्नुहनेछ । आफूले गरिरहेको कामबाट मानसम्मान प्राप्त हुनसक्छ । आफ्नो कर्मयात्रामा हिडिरहेकाहरुलाई नसोचेको सम्मान मिल्नसक्छ । धेरै खुसी र दुःखी नभइकन आफ्नो काम गरिरहनु होला । सूर्यनारायणलाई जल दिएर दर्शन गर्नुभयो भने दिन सफल हुनेछ ।
कुम्भ : कुम्भ राशिका जातकले आजको दिन सोचअनुसारको काम र शत्रुमाथि विजयप्राप्ति हुनेछ । ब्यापार व्यबसायबाट बाट प्राप्तबाट धनलाई सामाजिक सेवामा खर्च गर्नुभयो भने मानसम्मान मिलनेछ । सामाजिक काममा मन जानेछ । तपाईले गरेको कार्यको परिवारका सदस्य समेत खुसी हुनेछन् ।
मीन : विहीबारका दिन मीन राशिमा जातकले विहान सूर्योदयको दर्शन गरेर नजिक वा देवालयको दर्शन गर्नु उत्तम छ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रका कार्य गर्ने जातकले आजको दिन विहान सूर्यस्तोत्र पाठ गर्दा सकारात्मक सोच बढ्नेछ अध्ययन, चिन्तन र सिर्जनात्मक काममा समय खर्च गर्नुहोला ।
Previous एक महिलाले १२ पटक सम्म गरिन यस्तो काम जुन थाहा पाउदा सबै चकित…
Next फोक्सोलाई स्वस्थ राख्ने यी घरेलु तरिका, यी खानेकुरा खानाले क्यान्सरको जोखिम समेत कम गर्ने !